musha United Kingdom Singers Zayn Malik Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Zayn Malik Biography inokuudza chokwadi nezve ake ehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Musikana, Mwana, Hupenyu Hwega, Mararamiro uye Net kukosha.
Muchidimbu, inotaridza kuongororwa kwakadzama kwenhoroondo yeupenyu hwemuimbi kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakava nemukurumbira.
Kuti ukwidzire chishuwo chako chehupenyu hwehupenyu, heino bherero yake kune mukurumbira gallery, pfupiso yakakwana yeZayn Malik's Bio.
James Blunt Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
Zayn Malik's Biography: Tarisa uone pfupiso yehupenyu hwake uye simuka pikicha.
Hongu, munhu wese anoziva nezve ake mabelt uye falsetto maitiro ekuimba pamwe netsika yake yekurova manotsi akakwirira nezwi rake.
Nekudaro, vashoma chete vanoda mimhanzi vakaverenga iyo yakapfupika vhezheni yaZayn Malik's Bio iyo inonakidza kwazvo. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Zayn Malik Childhood Nhau:
Kune ekutanga biography, ane zita rekuti "Bradford mukomana akaipa". Zain Javadd Malik akazvarwa pazuva re12th raNdira 1993 kuna amai vake, Trisha Malik nababa, Yaser Malik muBradford, West Yorkshire, England.
Ndiye mwana wechipiri pavana vana vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake, inoratidzwa pazasi. Tarisai, Baba vaZayn Malik naAmai.
Sangana nababa vaZayn Malik, Yaser Malik naamai, Trisha Malik.
Mukomana mudiki airatidza kushamwaridzana kukuru kwemimhanzi panguva yehudiki hwake. Moreso, anoteerera nguva nenguva nziyo dzakatengwa nababa vake pazera diki kudaro.
Zayn Malik Kukura Mazuva:
Wechidiki wechidiki akarererwa muEast Bowling, Bradford. Achiri kakomana, ainakidzwa nokushamwaridzana nehanzvadzi dzake, Doniya, naWaliyha.
Kudzoka mumazuva akanaka ekare, wechidiki Malik aive akaparadzaniswa kubva kumatoyi ake. Aigara achiomerera kwavari, kunyangwe achitora mifananidzo nevamwe vese vemhuri yake.
Mufananidzo unonakidza wemuimbi ari kuuya nevakoma vake.
Kunze kwekuisa pakati pehupenyu hwake kutenderedza menage yake ine rudo, Malik zvakare akasangana neshamwari dzaive nechero kufarira iye.
Unoziva here?… Muvaraidzi aizouya akafarira zvinyorwa zveChirungu zvisingafungidzike. Izvi zvakaita kuti averenge mabhuku akawanda nemanovhero mumazuva ake ehudiki.
Zayn Malik Mhuri Yemhuri:
Mutambi anouya akakurira mumhuri yepakati. Baba vake vaigara vachichengeta vana.
Apo amai vake vaishanda semubiki we halal mukicheni yechikoro chepuraimari, vachibikira vana vechiMuslim.
Kunyange zvazvo vakanga vasina mari yokuvaka imba yavo, Zayn nevanin’ina vake vaigara muimba yokurenda.
Nemhaka yekushanda nesimba kwevabereki vake, mhuri yake yose haina kushayiwa zvinodikanwa zvoupenyu zvavaida.
Tarisa Zayn mudiki nemubereki wake Yaser naTrisha.
Zayn Malik Mhuri Yakatangira:
Achienda kumadzitateguru ake, amai vaMalik ndevechiRungu neIrish, nepo baba vake vari veBritish nePakistani nhaka.
Zvinosuruvarisa, muimbi apinda mumatambudziko mazhinji nekuda kwemidzi yake yeIslam Mhuri.
Munguva ye2014 Israel-Gaza kunetsana, akazove chinangwa chevazhinji vanopokana neMuslim. Unoziva here?… Nzvimbo yababa vake yaakabva (Pakistan) ndiyo chete nyika yeMuslim ine zvombo zvenyukireya.
Ehe, dzinza raZayn rinobva kuPakistan, asi akakura semugari weUnited Kingdom.
Nekuda kwemamhuri echiIslam emhuri, akazoziva kutaura Chirungu neUrdu, pamwe nekuverenga chiArabic.
Zayn Malik Dzidzo:
Iyo superstar yakapinda Lower munda yepuraimari chikoro uye Tong High chikoro. Semudzidzi, akatora makosi ekuita uye akaonekwa mumitambo yakati wandei yemitambo pane yake phrontistery.
Tarira mufananidzo wechikoro chepamusoro chaZayn Malik.
Munguva yemazuva ake ekutanga kuchidimbu, Malik akaita zvakaitwa nevazhinji celebs mudanho ravo rekutangisa. Kufanana Lil uzi vert, akanyora Raps uye akadzidza mazwi enziyo dzakakurumbira.
Kutevera kushanya kwaJay Sean (munyori wenziyo wechiRungu) kuchikoro kwake, Malik akawana mukana wekuita kekutanga pachikuva.
Mimhanzi payakange isingaratidzika kunge kushanda, akafunga kuyedza tsiva. Zvichida akafunga kuti zvaive nyore kuzviita senge Mike Tyson pane Jennifer Lopez.
Kwemakore maviri, Malik ainetsekana negwara rake idzva rebasa ndokuona kuti rakanga risingabereki zvibereko. Saka, akasiya tsiva aine makore 17.
Zayn Malik Hupenyu hwepakutanga - Basa:
Mushure mekusekondari, pfungwa yekuenderera kukoreji haina kupinda mupfungwa dzake. Asi, ane makore gumi nemanomwe Malik akaongorora semunhu airwira mumakwikwi emimhanzi yeBritish "The X Factor" mu17.
PaD-day haana kuda kuenda kuchirongwa asi akachinja pfungwa nekuda kwezano raamai vake.
Kunyange zvazvo akabviswa pamberi pekupedzisira kwekupedzisira, tarenda rake uye inzwi zvakasiya maonero anogara kune vatongi.
Munguva yekuongorora, Malik akaimba "Rega Ndikude”NaMario kuti apfuure denderedzwa rekutanga. Unogona here kuti iye ndiye muimbi wepanyama mushure mekuona mashandiro ake muvhidhiyo pazasi?
Mushure mekukwikwidza, vaviri vevatongi vakadzosa Malik pamwe nevamwe vana vaikwikwidza kuti vagadzire Mukomana Bhendi ndokuitumidza "One Direction". Pasina nguva iri kure, iro bhendi rakawana mukurumbira muUnited Kingdom.
Heano ese nhengo dzeboka dzeOne Direction. Unogona kuona Malik mumufananidzo?
Zayn Malik Bio - Kubudirira Nhau:
Sezvineiwo, mukurumbira we'One Direction' wakakwezva ane mukurumbira rekodhi rekodhi aida kuvatora pasi pemapapiro avo.
Pasina kuzeza, Malik nevashandi vake vakasaina kontrakiti inonzi inokosha £ 2 mamiriyoni neSyco Records.
Zvakare, mukurumbira wavo muNorth America wakavapa imwe chibvumirano neColumbia Records. Izvo hazvina kutora nguva yakareba vasati vaburitsa yavo yeboka studio studio - Pungwe.
Iyo yekuvharika pikicha yeOne Direction's debut studio album - Pungwe.
Iyo Album yakagadzira nzira yekushanya kwakawanda kwemimhanzi kwakatangwa nevashandi muna 2012. Moreso, yakarekora kubudirira kukuru nekukanda machati munyika gumi nenhanhatu (kusanganisira US neUK).
Iyo Bhureki Kure: - Kutsvaga kwekuzvizivisa wega:
Kwemakore angangoita mashanu, Malik akagara neOne Direction uye akave nenguva yakanaka neboka. Pamwe chete, ivo vakaburitsa maalbum mana uye vakaburitsa mabhuku mana akabudirira, izvo zvakavawanisa mamirioni emadhora.
Nekudaro, iye akasimuka celeb akanzwa zviitiko zvake nevashandi hazvina kumupa mukana wekurarama semunhu ane makore makumi maviri nemaviri ekuberekwa. Nekudaro, akasiya boka mu22 kuti abude muzvipingamupinyi zvaro zvekugadzira uye nekumaka chiratidzo chake semuimbi wemuimbi muindasitiri yevaraidzo.
Pakati peimwe yehurukuro dzake, Malik akataura zvirambidzo zvakatungamira mukufunga kwake kamwe kamwe kusiya boka. Akatsanangura kuti aisatenderwa kuchengeta ndebvu dzake, uyezve haatenderwe kupenda bvudzi rake. Zvisinei, kumira oga kwakasimudza kuderedzwa uku.
Mukutsvaga kwake kubudirira semuimbi ega, akasaina kondirakiti neRCA Records muna Chikunguru 2015.
Pakupedzisira, mu2016, Malik anobudisa album yake yekutanga, "Mind of Mine". Iyo album inotungamira single (Pillowtalk) yakanyora kubudirira kwemeteoric uye yakakwirisa chati yenyika dzakawanda.
Zayn's debut studio album- Pfungwa Dzangu
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi Bio, Malik akabatana nevazhinji vane mukurumbira vaimbi vakaita Lil Wayne uye Chris Brown.
Malik akahwina mibairo yakati wandei kubva paakasimuka mukurumbira. Teerera kutaura kwake kwakanaka paakakunda 2016 New Artist of the Year mibairo muvhidhiyo iri pasi apa.
Zayn Malik Vasikana Vemusikana uye Mukadzi Kuve:
Pakati pa2010 -2015 Zayn Malik akawana zvatinonyatsotsanangura semapfupi hoka-ups ane akati wandei anozivikanwa hunhu hwechikadzi.
Zvinosanganisira Geneva Lane (2010-2011), Rebecca Ferguson (2011), Stephanie Davis (2011) uye mamwe mashomanana, sezvinoonekwa mumufananidzo uri pasi apa.
Kuona kwevakadzi vakanaka vaakambodanana navo mumakore apfuura.
Muna Zvita 2011, Zayn akazopedzisira adanana nengirozi - Perrie Edwards kubva ku "Little Mix". Vakaroora vakatora hukama hwavo hwese nhanho nyowani zvichitevera kuita kwavo muna Nyamavhuvhu 2013.
Nekudaro, iyo yerudo nyaya iyo vateveri vazhinji yaifunga kuti yaizotungamira kune yekuroora yakaguma pane inosuruvarisa chinyorwa mu2015.
Ukama naGigi Hadid:
Unoziva here?… Zayn Malik akawana rudo zvakare ndokutanga kufambidzana nemuenzaniso weAmerican, Gigi Hadid, mwedzi mishoma mushure mekurambana kwavo kwekare. Akakwanisa kusimudzira hukama hwakareba nemusikana wake achangowana uyo airidza mumhanzi vhidhiyo yake "Pillowtalk".
Tarira iye akanaka celeb nemusikana wake akanaka akatendeuka mwana wamai.
Kunyangwe vaviri ava vasina kuroora, vakatora nhanho huru mukusunga kwavo nekutambira mwana wavo wekutanga anonzi Khai Hadid Malik munaGunyana 2020.
Zayn Malik Hupenyu Hwemhuri:
Iyo yaisambo iri nzira yakapusa yekuwana budiriro semuimbi. Nekutenda, iyo yakaoma nzira yaakaturika yakaitwa kutakura nekuda kwekutsigirwa kwemhuri yake. Muchikamu chino, tinokuunzira chokwadi pamusoro pababa vaMalik, amai, hama, uye hama.
Nezve Zayn Malik Baba:
Yaser Malik ndibaba muimbi. Sezvambotaurwa, Yaser muBritish-Pakistani anogara nemhuri yake muBradford, West Yorkshire. Iye ane basa rekusimudza Malik nekirasi yepamusoro yetsika.
Kutenda kuunganidzwa kwake kwenziyo dzine mukurumbira dzeR&B, hip hop, nereggae, mwanakomana wake akasvika pakukudziridza rudo rwakadzama rwemimhanzi.
Zvimwe hauna kumboziva kuti baba vaMalik vakaunganidza vateveri ve66,000 kuaccount yake ye Instagram nekungotumira mafoto emwanakomana wavo.
Wechidiki Zayn nababa vake vane yakanaka snapshot pamwechete.
Nezve Amai vaZayn Malik:
Imwe yembiru huru kune vocalist ndiTrisha Malik, amai vake. Kare kare, vairera vana vavo nenzira yechitendero.
Mai Trisha vakanga vasiri muMuslim pakuzvarwa. Akangotendeukira kuIslam mushure mekunge aroorwa nababa vaMalik.
Sangana naamai vake vakanaka, Trisha Malik. Pasina kupokana, akagara nhaka chidimbu cherunako rwake.
Ehezve, muimbi anogovera chisungo chakakura naamai vake; aive chikamu chese chinhu muhupenyu hwake. Angadai asina kuzviita mukuongorora kwake muX-Factor pasina iye.
Nezve hama dzaZayn Malik:
Chimwe chezvipo zvakasarudzika zvaaive nazvo muhupenyu hwake kuvapo kwehama dzake. Sezviri pachena, ndizvo izvo chikonzero chaasina kumbofanira kunzwa kusurukirwa paaikura.
Zvinosekesa zvakakwana, ndiye ega mwana mukomana mumhuri yake. Mukoma wake mukuru ndiDoniya, nepo vanin'ina vake vaviri vari Waliyha naSafaa Malik.
Iko kutaridzika kwechiso chehanzvadzi dzake kunoratidza kufara kwavakaita kumuona.
Nezve hama yaZayn Malik:
Achienda kumadzitateguru ake, sekuru nasekuru vake ndiDean Brannan naWalter Brannan. Dzimwe hama dzake dzinosanganisira; Lesley, Ronnie, Philip, naChris.
Pakange pasina ruzivo rwakawanda nezvedzinza rababa vake. Chatinoziva inyaya yekuti sekuru nasekuru vake vakauya kuUnited Kingdom vachibva kuPakistan.
Hupenyu hweZayn Malik Hupenyu:
Chii chinoita kuti muimbi ane tarenda ave mukobvu?… Kutanga, Zayn Malik's persona isanganiswa yemhando yeCapricorn zodiac. Ndiye mumwe wevatambi vane tariro uye vanehunhu vaungazosangana navo.
Kunze kwekuyedza kwake kwekuimba, Zayn zvakare fashoni. Moreso, iye nemusikana wake, Gigi Hadid vari chikamu chechizvarwa chitsva vasingaone fashoni senge mukadzi wechikadzi. Zvimwe zvezvaanofarira zvinosanganisira kutamba, kudhirowa, uye kuverenga (rake raanofarira bhuku ndiHarry Potter).
Pfungwa yake yemafashoni yakamutungamira kuti apfeke akasarudzika ehembe dzekupfeka nerunyorwa rweUurdu.
Zayn Malik Mararamiro:
Semunhu anoda chinzvimbo uye anoshanda nesimba muvaraidzi, Malik akaunganidza zvakawanda zveumbozha uye mukurumbira. Neye anofungidzirwa Net Kukosha yemadhora makumi matanhatu nemashanu emamiriyoni (65 stats), hapana akawanda akakwidza zvekunze zvaasingakwanise.
Akachengetera Bentley Continental GT, Nhema Audi R8, Ferrari 458 Italia, Black Range Rover, Mercedes, uye Cadillac Escalade mune yake yakasarudzika mota muunganidzwa.
Kuona kwevamwe vatasvi vake veumbozha.
Uyezve, muvaraidzi ane imba yekurima muPennsylvania, kwaaipedza yakawanda yenguva yake nemumwe wake. Iye zvakare ane imba muHertfordshire.
Zayn Malik Untold Chokwadi:
Kuputira nyaya yehupenyu yemuimbi, hezvino zvimwe zvinonakidza zviitiko izvo zvingakubatsire iwe kuti unzwisise nhoroondo yake zvakakwana.
Chokwadi # 1: Chitendero chaZayn Malik:
Munyori wenziyo ane mukurumbira akaberekerwa mumhuri yechiIslam uye akarerwa semuslim akazvipira. Akagamuchira chinamato kubva pakuzvara uye kazhinji anowanzoenda kumosque pazvinenge zvichidikanwa.
Kutevera kumuka kwake mukurumbira, Malik haasisiri kuzvizivisa iye nechitendero chekurerwa kwake. Nekuda kweshure rake reIslam, anokwanisa kuverenga Korani uye anonyatsonzwisisa chiArabic.
Chokwadi # 2: Zayn Malik Kudya Dambudziko:
Ipo muimbi achiri muchikwata chevakomana "One Direction", akatambura nedambudziko rekudya izvo zvakaita kuti arasikirwe nehuremu. Mamiriro ake ezvinhu akauya nemhedzisiro yakakomba yechirwere chisingachinji.
Malik haana kuudza boka nezvekukanganisika kwake uye kushushikana kusvikira avasiya. Nekutenda, akapora kubva pane chakashungurudza chiitiko mushure mekunge avaka chivimbo chake semuimbi wemuimbi.
Chokwadi # 3: Zayn Malik's Tattoos:
Unoziva here?… iyo mimhanzi icon yakanyora pamusoro pe46 tattoos pamuviri wake. Imwe neimwe yematattoos ake ine zvayanoreva.
Kutaura zvishomanana, dindingwe rakaiswa ingi paruoko rwayo rwepamusoro rworudyi rinomiririra simba, simba, uye simba.
Mukuratidza kuratidza kuremekedza kwake kukuru baba vake, aive nezita "Yaser" rakanyorwa kuseri kwenzeve yekurudyi.
Hongu, anoda maTattoos uye anovaona sechirevo chemafashoni neunyanzvi.
Zayn Malik Biography Pfupiso:
Tafura iripazasi inopfupisa Yevacheche Nyaya yeanozivikanwa nyeredzi.
Zita rizere: Zain Javadd Malik
Zita rekudanwa: Bradford mukomana akaipa
Nzvimbo yekuzvarirwa: Bradford, West Yorkshire
Baba: Yaser Malik
Amai: Trisha Malik
Vanun'una: Doniya, Waliyha, uye Safaa (hanzvadzi)
Musikana / Wife Kuve: Teeth Hadid
Net Worth: $ 65 mamirioni (2021 stats)
kukwirira: 1.75 m (mashanu tsoka 5 inches)
Hobbies: Kutamba, kudhirowa, uye kuverenga
Chimwe chinhu chinokatyamadza nezveBio yake kugona kwake kuzvimiririra. Kwemakore, akaratidzira kuti haasi iye anokundikana. Kuzvipira kwake kwakazara uye kushanda nesimba kuita basa rake zvakamukurudzira kusvika pakakwirira budiriro.
Zvinofanirwa kuti titende mhuri yake nekumira paari panguva yake yese yematambudziko.
Zvakare, rangarira kuti vabereki vake nevanin'ina vake vateveri vake vekutanga. Tinovonga nekuverenga yedu Zayn Malik Childhood Story uye kumwe kuparara kweBio yake.
Childhood Biography Diary- yeBritish Male Singers